“Ma damin kartid oo xitaa Silent ma saari kartid.”.- Barcelona oo Ganaax Yaab leh ku soo rogtay Dembele xilli uu….!! – Gool FM
“Ma damin kartid oo xitaa Silent ma saari kartid.”.- Barcelona oo Ganaax Yaab leh ku soo rogtay Dembele xilli uu….!!
Byare December 15, 2018
(Spain) 15 Dis 2018. Sheekada Barcelona iyo Ousmane Dembele ayaa gaartay heer wiilka reer France lagu amro inuusan damin karin Taleefankiisa xilli uu sii xoogsanayo walaaca ay Kooxdu ka qabto hab-dhaqankiisa.
Dhaliyihii hore ee Dortmund ayaa gool indho daraandar ah ka dhaliyay kooxda Tottenham isla usbuuc ay kooxdiisu ku ganaaxday lacago dhan 90,000 maadaama uu labo saacadood ka soo daahay tababarka.
Dembele ayaa hadal uu ka jeedinayay qolka dharbadelashada kooxda ka codsaday saaxiibadiisa inay ka cafiyaan falka uu ku kacay, balse Tababare Valvarde ayaa iminka dhagaha ugu shubay inuusan markale damin karin taleefankiisa ama xitaa uusan Silent saari karin waqtiga habeenka si ay kooxda markasta ula xiriiri karto haddii ay lacalo soo kororto xaalad kale oo isagu ku aadan sida uu warinayo jariiradda Marca.
Maamulka Barcelona ayaa aad uga walaacsan hab dhaqanka laacibka reer France iyagoona aaminsan inuu ku waalan yahay ciyaarista Muuqaalada Game ka aroorta hore ee subaxii taa oo keenta inuu ka soo daaho tababarka.
Hadalo kasoo yeeray Fabregas oo muujinaya inuu dhamaaday xiriirka kala dhexeeyay kooxda Chelsea
Guushii ay ka gaareen Everton, dib u soo laabashada De Bruyne iyo Guardiola oo dhowr arimood ka hadlay